हाम्रो लिनुहोस् 'तपाईंलाई भिडियो भिडियो आवश्यक छ' प्रश्नोत्तरी | Konnekt
के हामीलाई भिडिओफोन चाहिन्छ?
पत्ता लगाउन यो साधारण7प्रश्न प्रश्न लिनुहोस्:
म आमा / बुबा वा मेरो ख्याल गर्ने व्यक्ति देख्छु ...
अध्ययन1 FACE-TO-FACE सम्पर्कको अभाव देखाउनुहोस्, परिवार र साथीहरूसँग प्रति हप्ता कम्तीमा3पटक, अवसादको जोखिम डबल गर्दछ।
छिमेकीहरु वा कर्मचारीहरु हेरिरहेको छ छैन प्रियजनहरूलाई हेर्दा उही हो र अध्ययनमा कुनै मापन अंतर छैन।
भिडियोफोनले तपाईंको ख्याल गर्ने व्यक्तिलाई उनीहरूको प्रियजनहरूसँग आमने सामने कुरा गर्न सक्षम गर्दछ।
टेलिफोनि,, पाठ पठाउँदै वा ईमेल पठाउँदै छैन आमने सामने सम्पर्क को रूप मा नै, र अध्ययन मा कुनै मापन भिन्नता गरे।
जे होस् तपाई औसत भन्दा अधिक पटक भ्रमण गर्नुहुन्छ, अनुसन्धानले देखायो कि मापन योग्य लाभहरु प्राप्त गर्न प्रति हप्ता3पटक न्यूनतम हुन्छ। भिडिओफोनले तपाईलाई अनुहार सम्पर्क बढाउन सक्षम बनाउँदछ, तपाईं जहाँ भए पनि फरक पर्दैन।
बधाई छ! तपाईं एक समर्पित केयर-दाता हुनुहुन्छ। भिडियोफोनले तपाईंको ख्याल गर्ने व्यक्तिलाई पनि हेर्नको लागि अनुमति दिन्छ अन्य धेरै प्रियजनहरूलाई।
जब मेरो ख्याल गर्ने व्यक्तिले फोनको जवाफ दिँदैन, म चिन्तित हुन्छु ...
नराम्रो निद्रा बानी
स्वत: उत्तर (वैकल्पिक) चिन्ता कम गर्दछ
ग्राहम गिर्यो, उसको बुढेसकाल हेरचाह गृह कोठामा (सत्य कथा)। ऊ उठ्न सकेन।
उसको अन्तरराज्यीय छोराले उसको भिडियोफोन बोलायो। 60 सेकेन्ड पछि, यसले स्वतः-जवाफ दिए, 2- तरीका भिडियो र ध्वनिको साथ। ग्राहमलाई आफ्नो छोरालाई देखेर ढुक्क लाग्यो! भिडियो फोनका लागि धन्यबाद, मद्दत मात्र मिनेट टाढा थियो।
हाम्रो ग्राहक नर्मन एकदम स्वतन्त्र छ र एक्लै बस्दछ (सत्य कथा)। अब जब उनी 80 भन्दा माथि छ, आफ्ना बच्चाहरु चिन्तित छन्। नर्मेनले आपतकालीन पेन्डन्ट लगाउँदैन, र जब उसले आफ्नो टेलिफोनको उत्तर दिँदैन, आफ्ना बच्चाहरू चिन्तित हुन्छन्।
अब जब नर्मनको विश्वस्त वयस्क बच्चाहरू कल गर्दछन्, उसको भिडियोफोन 60 सेकेन्ड पछि स्वचालित रूपमा जवाफ दिन्छ र तिनीहरूले ठीक छ कि छैन जाँच गर्छन्।
ओल्गा 90 हो र एक्लै बस्दछ (सत्य कथा)। उनी घण्टासम्म उनको मनपर्ने कुर्सीमा सुत्छिन्, उनको औषधि हराउँछिन्, र रातभरि सुत्दा समस्या हुन्छ। उनका छोराहरू पागल जस्तो चिन्तित छन् जब उनी टेलिफोन उठाउँदैनन्।
भिडियोफोनले मात्र अनुमति दिन्छ विश्वसनीय हेरचाहकर्ताहरू, कि तपाई मनोनीत, चेक-इन गर्नका लागि।
म कहिलेकाँही उनको / उनीको बारेमा चिन्ता गर्छु।
अनुसन्धानले सामाजिक अलगाव वा एकाकीपनलाई कम निन्द्रासंग जोड्दछ1, डिमेंशिया2, अवसाद3, मुटु रोग4 र विकृति5.
भिडियोफोनको साथ, तपाईं एक्लोपना कम गर्न केहि सकारात्मक गर्न सक्नुहुन्छ!
हाम्रो भिडियोफोन ग्राहकका छोरा / छोराले हामीलाई खुशी पार्दछन् कि उनीहरू खुशी छन्। अध्ययनहरूले स्वास्थ्यको राम्रो नतिजाको साथ खुशीलाई जोड्दछ। उदाहरण को लागी, आशावाद स्ट्रोक को लागी वयस्क वयस्क लाई बचाउँछ1। मुस्कुराउनु स्वास्थ्यको सुधारसंग पनि जोडिएको छ2; यो आकर्षक छ, र जब तपाईं मुस्कुराउनुहुन्छ, यसले वास्तवमा तपाईंलाई राम्रो महसुस गराउन सक्छ।
वीडियोफोनको साथ, तपाईं सजिलैसँग एउटा मुस्कान साझा गर्न सक्नुहुनेछ, जब तपाईं चाहानुहुन्छ।
किम एट अल "स्वस्थ आशावादीताले वयस्कहरूलाई स्ट्रोकबाट बचाउँछ" स्ट्रोकाहाह एक्सएनयूएमएक्स
हाबेल एट अल "स्माइल इन्टेन्सिटी ... दीर्घायु भविष्यवाणी गर्दछ" जे साइक साइ एक्स एक्सएनएमएक्स
स्वास्थ्य जोखिमको रूपमा, सामाजिक अलगाव सिगरेट धूम्रपानको तुलना गर्न मिल्छ! एक 2013 अध्ययन1 सामाजिक सम्बन्धले पर्याप्त निद्रा, आहार, व्यायाम र औषधीय अनुपालनलाई प्रोत्साहित गर्दछ भनेर देखाउँदछ।
भिडियोफोनको साथ, अब सबैजना मित्र र सबै उमेरका आफन्तहरूसँग सम्पर्कमा आउन सक्छन्।
हेमिंग्वे एट अल "सामाजिक अलगाव घटाउने र बुढो मानिसहरूमा राम्रोसँग प्रबर्धन गर्ने" उमेर र पुरानो वयस्कहरू 2013 मा गुणस्तर
मैले हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई आईप्याड / ट्याब्लेट वा ल्यापटप प्रयोग गर्न सिकाउने कोशिस गरेको छु तर ऊ निराश देखिन्छ किनभने
अपरिचित टेक्नोलोजी डरलाग्दो छ
यो किचनको बेन्चमा अप्रयुक्त छ
मलाई निरन्तर सहयोगको लागि बोलाइन्छ
स्वतन्त्रता आत्मसम्मानको लागि महत्त्वपूर्ण छ
पेगले कहिल्यै मोबाईल वा आईप्याड चाहदैन। उनी टेक्नोलोजीसँग डराउँछिन् र चिन्ता गर्छिन् कि उनले त्यसलाई छोडिदिन वा यसलाई उपयोग गर्न असक्षम भइन् (सत्य कथा)।
अविश्वसनीय सरल वीडियोफोनले तपाईको ख्याल व्यक्तिलाई उनीहरुको जीवनको फिर्ता लिन, आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्दछ। भिडियोफोन एक समर्पित उपकरण हो। त्यहाँ कुनै किबोर्ड वा माउस छैन। कुनै लगइन वा पासवर्डहरू छैनन्। कुनै पप-अप वा विज्ञापनहरू छैनन्। कुनै आईकन, मेनू वा संवाद बक्सहरू छैनन्।
रोबर्टको मोबाइल फोन अब एक पेपरवेट (सत्य कथा) मात्र हो। उसले निराश पार्‍यो किनभने यो दुबै सजिलोसँग चार्ज गर्न र प्रयोग गर्नका लागि छ।
भिडियोफोनले यी र अन्य समस्याहरू समाधान गर्दछ। वास्तवमा, यो नियमित टेलिफोन भन्दा प्रयोग गर्न सजिलो छ।
डेभिड लगातार आफ्नो कारमा जान्छ उसको आमाको आईप्याड "फिक्स" गर्न प्रत्येक अपडेट पछि वा अप्रत्याशित पप-अप (सत्य कहानी) पछि।
भिडियोफोनको साथ, तपाईंलाई सहयोगको लागि बोलाइनेछैन।
Konnekt टाढाबाट कल बटन, भोल्यूम वा कुनै अन्य सुविधा परिवर्तन गर्न सक्दछ - भ्रमणको आवश्यकता बिना नै!
मेरो ख्याल गर्ने व्यक्ति द्वारा बाधा पुर्‍याएको छ ...
पुराना वयस्कहरूको लागि आदर्श
ग्राहमको सुनुवाई कमजोर छ। प्राय: जब आफ्नो उपकरण उठाउँदा, ऊ संयोगले भोल्युम-डाउन बटन होल्ड गर्दछ। आवाजले टिन्नी बजायो र उसलाई यो रिंग (साँचो कथा) सुन्न समस्या भयो।
भिडियोफोन अविश्वसनीय चर्को सेट गर्न सकिन्छ। यसले ओठ पठन, सा language्केतिक भाषा, र श्रवण-सहायक प्रवर्धक / लूपको प्रयोग सक्षम गर्दछ। तपाईं प्रयोगकर्तालाई पाठ पनि टाइप गर्न सक्नुहुनेछ जब कुरा गर्दा उनीहरू एक शब्द पनि याद गर्दैनन्!
भिडियोफोनसँग 15 इन्च स्क्रीन छ। प्राय: आईप्याड / ट्याब्लेटको पर्दा डबल भन्दा बढी छ। बटन अप गर्न सकिन्छ 15 सेमी (6in) चौडा, पाठ हो ठूलो र, दर्शन समस्याहरूका लागि, भिडियोफोन उच्च कन्ट्रास्ट रंग योजनाहरूको छनौटको साथ आउँदछ।
जुनले सबै समय ग्लोभज लगाउँदछ किनकि ऊसँग धेरै संवेदनशील हातहरू छन्। उनीले 99% टचस्क्रीन प्रयोग गर्न सक्दिन (सत्य कहानी)।
भिडियोफोन एक छ प्रतिरोधात्मक टच स्क्रिन। यो ग्लोभ वा ब्यान्ड्याजेड हात, एक कृत्रिम, वा कुनै पनि सूचक यन्त्र प्रयोग गरेर अपरेट गर्न सकिन्छ। बटनहरू विशाल र हिट गर्न सजिलो छ, अल्झाइमर, पार्किन्सन्स, हल्लिएको हातहरू वा कमजोर हात-आँखा समन्वयको साथ भिडियोको लागि आदर्श बनाउँदै।
जोआना अक्सर आफ्नो परिवारको नाम मिलाउँछिन्। यसले उसलाई धेरै विचलित तुल्यायो।
भिडियोफोनले नाम, आवाज र अनुहारहरू बीचको जडानलाई सुदृढ बनाउँछ। यी संकेतहरूले तपाईंको ख्याल गर्ने व्यक्तिलाई उनीहरूको प्रियको सम्झनाहरू सम्झन मद्दत गर्दछ।
मैले हेरचाह गरेको ब्यक्तिले परिवार / साथीहरूलाई उनीहरूले जस्तो मन पराउँदैनन्
किनभने तिनीहरू राम्रो यात्रा गर्दैनन्
यात्रा लागतका कारण
परिवार र साथीहरु धेरै व्यस्त छन् को रूप मा
जताततै मित्रहरूलाई असीमित फेस-टु-फेस कलहरू
Gran फेरि कुनै पनि समयमा चाँडै विमानमा आउँदैन।
भिडियोफोनले तपाईंको ख्याल गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी परिवार, अनुहार-देखि-आफ्नै घरको आरामबाट देख्न अनुमति दिन्छ।
टिम र उसको परिवार कामको साथ अन्तर्देशीय सरे। ती चारै जनालाई उनीहरूको बुवालाई भेट्न धेरै खर्चिलो छ किनकि उनीहरू उनीहरूलाई मनपराउँथे (सच्चा कहानी)।
भिडियोफोन एक नियमित टेलिफोन कल भन्दा राम्रो छ किनकि तपाईं एक-अर्कालाई आमने सामने देख्न सक्नुहुनेछ र ईन्टरसेट स्टेट चार्जहरू छैनन्।
हामी सबैको व्यस्त जीवन छ। गृह प्रतिबद्धता, काम, हाम्रो आफ्नै परिवार र साथीहरू र स्वास्थ्य समस्याहरू। हामी आफूले चाहे जति यात्रा गर्न सक्दैनौं।
भिडिओफोनले खाली पार गर्दछ। तपाईंको मोबाइल / ट्याब्लेटबाट काममा, किनमेलको क्रममा वा ट्रेनमा पनि भिडिओफोनलाई भेट्नुहोस्।
भिडियोफोनले तपाईंको ख्याल गर्ने व्यक्तिलाई टाढाको परिवार र साथीहरू प्राय: जसो उसले / उसले चाहे अनुसारको हेर्न दिन्छ, कुनै पनि समयमा ... कुनै यात्राको आवाश्यकता बिना।
ऊ / उनी अधिक कुरा गर्न चाहन्छन् तर ...
अन्तर्देशीय र विदेशमा कलिंगलाई घृणा गर्दछ
मेरो मोबाइलमा र कलको बारेमा चिन्ता
अहिले फोन प्रयोग गर्न संघर्ष गर्दछ
ल्यान्डलाइनमा असीमित कलहरू
भिडियोफोनले स्थानीय फोनहरू, अन्तरराज्यीय र विदेशी देशहरूको छनौट गर्नका लागि असीमित कलहरू समावेश गर्दछ।
तपाईंलाई जहिले पनि कल गर्नुहोस्, तपाईंले चाहे जति बेला, कुनै पनि समयमा।
स्मार्टफोनमा असीमित कलहरू
भिडियो फोनमा कल गर्न र संसारभरि मोबाईलबाट कल कल लाग्दैन।
हाम्रा धेरै ग्राहकहरूको फोन बिलहरू केवल न्यूनतम मासिक रकममा $ 80 भन्दा कममा सिमित भएको छ।
भिडियोफोन छ धेरै नियमित टेलिफोन भन्दा प्रयोग गर्न सजिलो।
हाम्रा बुढेसकालका ग्राहकहरू साथीहरूको साथ छुईरहेको देखेर छक्क र खुशी छन् विशाल टांक।
मेरो आमा / बुबा वा मेरो ख्याल गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य र खुशी मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हो
त्यसोभए हामीलाई भिडिओफोन चाहिन्छ?
तपाईं सबैभन्दा राम्रो न्यायाधीश हुनुहुन्छ! आशा छ, यो सानो क्विजले तपाईंलाई अधिक पत्ता लगाउने कि नगर्ने निर्णय गर्न मद्दत गरेको छ।
कृपया मलाई एक उत्पादन फ्लाईयर पठाउनुहोस् जुन म मेरो ख्याल गर्ने व्यक्तिसँग साझेदारी गर्न सक्दछु
हेरचाह दिनेहरूका लागि
एक महान छोरा / छोरी वा हेरचाह दिने, भिडियोफोन समाचार, र भिडियोफोनले कसरी तपाईंको ख्याल गर्ने व्यक्ति जस्ता व्यक्तिलाई मद्दत गर्दछ भन्ने बारेमा सामयिक कथाको बारे सुझाव र सुझावहरूको सदस्यता लिनुहोस्। चिन्ता नलिनुहोस्, हामी तपाईंको गोपनीयतालाई सम्मान गर्नेछौं र तपाईं कुनै पनि समयमा सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुनेछ।
मेरो सबै भन्दा राम्रो सम्पर्क फोन नम्बर
शहर राज्य / प्रदेश / क्षेत्र अफगानिस्तानअलान्ड टापुअल्बानियाअल्जेरियाअमेरिकी समोआAndorraअङ्गोलाआङ्गुइलाअन्टार्कटिकाएन्टिगुवारबार्बुडाअर्जेन्टिनाआर्मेनियाआरूबाअष्ट्रेलियाअस्ट्रियाअजरबैजानबहामासबहराइनबंगलादेशबारबाडोसबेलारुसबेल्जियमबेलिजबेनिनबर्मुडाभूटानबोलिभियाबोनाइर, सिन्ट इउस्टाटिउस र साबाबोस्निया र हर्जेगोविनाबोत्स्वानाबुभेट टापुब्राजिलबेलायतभारतसमुद्रीभूभागब्रूनइबुल्गेरियाबुर्किना फासोबुरुन्डीकम्बोडियाक्यामरुनक्यानाडाकेप वर्डकेमैन द्वीपमध्य अफ्रिकी गणतन्त्रचाडचिलीचीनक्रिसमस आइल्याण्डकोकोस टापुहरूकोलम्बियाकोमोरोसकंगो, लोकतांत्रिक गणराज्यकांगो गणतन्त्रकुक टापुकोस्टा रिकाकोट डी'आइवरक्रोएशियाक्युबाकुराकाओसाइप्रसचेक गणतन्त्रडेनमार्कडिजिबुटीडोमिनिकाडोमिनिकन गणतन्त्रइक्वेडरमिश्रएल साल्भाडोरइक्वेटोरिअलगिनेआइरिट्रियाइस्टोनियाएस्टाटिनि (स्वाजील्याण्ड)इथियोपियाफकल्याण्ड टापुफारोईद्वीपफिजीफिनल्याण्डफ्रान्सफ्रेन्चगिआनाफ्रेन्चपोलीनेसियाफ्रान्सेली दक्षिणी क्षेत्रगावोनगाम्वियाजर्जियाजर्मनीघानाजिब्राल्टरग्रीसग्रीनल्याण्डग्रेनेडाग्वाडेलोपGuamग्वाटेमालागुएर्नेसीगिनीगिनीबिसाउगुयानाहैटीसुनेका र म्याकडोनाल्ड टापुहोलीHondurasहङकङहंगेरीआइसल्याण्डभारतइन्डोनेशियाइरानइराकआयरल्याण्डमानिसको आइलइस्राएलकाइटालीजमाइकाजापानजर्सीजोर्डनकाजाकिस्तानकेन्याकिरिबातीकुवेतकिर्गिस्तानलाओ जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाटवियालेबनानलेसोथोलाइबेरियालिबियालिएखटेन्स्टाइनलिथुआनियालक्जेम्बर्गमकाउम्यासिडोनियामडागास्करमालवीमलेसियामाल्दिभ्समालीमाल्टामार्शलद्वीपमार्टीनिकमाउरिटानियाMauritiusमायोटीमेक्सिकोमाइक्रोनेशियामाल्डोवामोनाकोमङ्गोलियामोन्टेनेग्रोमोन्टसेर्राटमोरक्कोमोजाम्बिकम्यानमारकोनामिबियानाउरूनेपालनेदरल्यान्ड्सनयाँ कैलेडोनियान्यूजील्याण्डनिकारागुवानाइजरनाइजेरियानियूNorfolk Islandउत्तर कोरियाउत्तरीमारिआनाद्वीपनर्वेओमानपाकिस्तानपलाउप्यालेस्टाइन, राज्य कोपानामापापुआ न्यु गिनीप्यारागुवापेरुफिलिपिन्सपिटकेर्नपोल्याण्डपोर्चुगलप्युर्तोरिकोकताररियुनियनरोमानियारूसरवांडासेन्ट बार्थेलेमीसेन्ट हेलेनासेन्ट किट्स र नेविससेन्ट लुसियासेन्ट मार्टिनसेन्टपियरएन्डमिक्वेलनसेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्ससामोआसानमारिनोसाओटोमरप्रिन्सिपसाउदी अरबसेनेगलसर्बियासेचिलिससियरा लियोनसिंगापुरसिन्ट मार्टिनस्लोभाकियास्लोभेनियासुलेमान द्वीपसोमालियादक्षिण अफ्रिकादक्षिण जर्जियादक्षिण कोरियादक्षिण सुडानस्पेनश्रीलंकासुडानसुरिनामसभाल्बार्ड र मायेन टापुस्वीडेनस्विट्जरल्याण्डसिरियाताइवानताजिकिस्तानतान्जानियाथाईल्याण्डटिमोर-लेस्टेटोगोतोगोटोंगात्रिनिदाद र टोबागोटुनिशियाटर्कीतुर्कमेनिस्तानतुर्करकैकोसद्वीपतुभालुयुगान्डायुक्रेनसंयुक्त अरब एमिरेट्ससंयुक्त राज्यसंयुक्त राज्य अमेरिकाउरुग्वेअमेरिकी लघु द्वीपसमूहउज्बेकिस्तानभानुतुभेनेजुएलाभियतनामभर्जिन टापुहरू, बेलायतीभर्जिन टापुहरू, अमेरिकावालिसएन्डफुटुनापश्चिमी सहारायमनजाम्बियाजिम्बाब्वे देश
फारम आईडी:, 44, फारम नाम: डिमेन्शिया क्यारियर क्विज, पोष्ट / पृष्ठ आईडी: 3709 27०,, पोष्ट / पृष्ठ शीर्षक: एक भिडियोफोन चाहिन्छ ?, मिति (dmy): २/09/०२/२०२०, प्रयोगकर्ता आईपी ठेगाना: ११२.2020०.०.112.140.180.73.०..,, एम्बेड URL : https: // www।konnekt.com.au / आवश्यकता एक भिडियोफोन /, HTTP रेफर URL: